पुतलीको लागि मेरो प्रेम पत्र !! | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← किसुनजीले खाना खान छाडे, प्राकृतिक उपचार गर्न भक्तपुरको चित्तपोलमा
कोइराला सभापतिमा निर्वाचित →
Posted on 21/09/2010 by जय आले |2टिप्पणीहरु
व्यक्तिलाई लेख्नको लागि खासै केहि बिषयको जरुरत हुँदो रहेनछ । हिजोसम्म पनि कलम उठाउन नखोज्ने यि हातहरु आज लेख्नको लागि लालईत छन् । यधपि के लेख्ने भन्ने अझै यकिन भईसकेको छैन अर्थात भनौ म कुनै लेखक हैन जो कुनै पनि बिषयमा लेख्न सक्छ । तर पनि यि हातहरुले लेख्ने अठोट गरिसके, जसको बिरुद्व म जान सक्दिन । साधरणतया मानिसहरु प्रेम, बिछोड, युद्व, प्रकृति, सुन्दरता, विबशता, धर्म, सँस्कृति जस्ता बिषयमा लेख्छन् । तर म के बिषयमा लेखुँ भन्ने’bout सोच्न सकेको छैन । तै पनि लेख्दैछु थाहा छैन लेखाई कतातिर मोडिन्छ भनेर ।
आफ्नो प्रेमिकालाई प्रेम पत्र त सबैले लेखेका होलान् तर आज म आफ्नी प्रमेकीलाई त्यस्तो पत्र लेख्न चाहन्छु जो कसैले आफ्नो प्रेमिकाको लागि लेखेको नहोस् । मेरी प्रेमिकाको लागि मेरो प्रेम पत्र यसरी शुरु हुन्छ;
मिती : सागर पलाएको रात
समय : त्यो बेला जब म जस्ता प्रेमीहरु जागेका हुन्छन्
स्थान : सुनसान एकान्त
अटुट सम्झना अनि अथाह-अथाह प्यार !
विबश यो आत्म विबश यो हृदय अनि आज विबशता र भयनकताको तडपबाट मुक्ती पाउने आशामा उहिल्यै देखि नै हृदयान्तरमा गुम्सिएर रहेका चाहनका भण्डारलाई छचल्क्याउने दुष्प्रयास गरको छु । यस अनभिज्ञताको परिधि भित्र कोरिएका भुल प्रति क्षमा याचना । न त म प्रेमको पुजारि हुँ, न त प्रेमको खेलाडि नै । म त केवल तिम्रो सत्व्यबहार सत-आत्मबिच अल्झिएको एक आत्म हुँ । न त तोड्न सक्छु न त पोख्न नै केवल छचल्क्याउन मात्रै । रोमियो जुलियत, लैला मजनु जस्तो मेरो प्रेम महान त पक्कै नहोला तर खुशीमा हाँसो र दुःखमा तिम्रो साथ दिन सक्छु भन्ने प्रण गर्दछु ।
स्वर्गका ति परीहरुलाई नदेखेता पनि ’emको ’boutमा ता पक्कै सुनेको छु तर मलाई लाग्छ ति स्वर्गका परीहरु तिमी भन्दा सुन्दर त पक्कै छैनन् । सायद तिम्रो त्यो चन्द्रमुखि मुहार सामु मेरो प्रेम मरभुमी बिचको एक मुठ्ठि बालुवा सरि हुन सक्छ । सुँन चाँदि, हिरा मोति त तिमीलाई म पक्कै दिन नसकुला जिन्दगीभर न्यानो माया पक्कै दिन सक्नेछु । हुन त तिम्रो सामु प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरु त हजारौ होलान् । तर ’emले तिमीलाई भन्दा तिम्रो जवानिलाई प्रेम गरे होलान् । मैले तिमीलाई त्यो बेला देखि माया गर्छ जुन बेला तिमी र म गह्ये खोलाको बाटो हुदै बिधालय जान्थ्यौ ।
सायद तिमीलाई यादै होला, हामी सानो छँदा घरबाजि खेल्ने गर्दथ्यौ र त्यो खेलमा तिमीले कहिल्यै पनि भुन्टिलाई मेरो श्रीमति हुन दिईनौ, यदि कोहि भईहाल्यो भने पनि तिमी मसँग हप्तौ बोल्दिनथ्यौ । विधालय जाँदा, आँउदा, खेल्दा तिमी ठुस्किएर कत्रौ रवाफ देखाउँथ्यौ । यसर्थ: तिमी मलाई अथाह प्रेम गर्दथ्यौ । कुनै दिन म विधालय नजाँदा तिमी पनि विधालय जाँदिनथ्यौ, म विरामि भएर ओछ्यानमा लड्दा तिमी घन्टौ मलाई हेरी रहन्थ्यौ अनि आमासँग मलाई कहिले ठिक हुन्छ भनि रन्चे स्वरमा सोदथ्यौ ।
आज तिमी र छुट्टिएको पनि १३ बर्ष पुगिसकेछ । यो समयमा थुप्रै साथि भए होलान् । र तिमीले त बिर्सी पनि सक्यौ होला अर्थात तिमी मलाई प्रेम गर्दिनौ होला । तर पनि म तिमीलाई पत्र लेख्ने दुस्साहस गर्दैछु । सायद तिमीलाई अचम्म लाग्ला त्यो गह्ये खोलाको हाम्रो भकुन्डे घर अझै यथावत छ । बर्षेनी बाढि र भेल आँउदा पनि त्यो भकुन्डे घर त्यस्तै नै खडा छ । यसर्थ मलाई लाग्छ तिमी मलाई त्यत्ति नै प्रेम गर्छ्यौ । तिम्रो सामु म यि दुई हात फिंजाई प्रेमको भिख माग्दछु । स्विकार गर्नेछौ भन्ने आशा लिएको छु ।
उही तिमीलाई माया गर्ने,
2 responses to “पुतलीको लागि मेरो प्रेम पत्र !!”
bhuwan | 22/09/2010 मा 6:23 अपराह्न |
वास्तवमा यो कलम र कोर्ने हातलाई सलाम मार्नै पर्छ मायाको सागरमा डुवेका तर विविध वाध्यताले जीवनमा विछोडीएकाहरुको जीवनलाई सायद यो पढे पछि आखाँबाट बाढी नवग्न मान्दैन । साथी यस्तो सृर्जनालाई निरन्तरता दिनु फेरी पनि हाम्रो प्यासलाई मेटाउने काम गर्नु । यो संसारमा प्रेम ’bout सबैका आफ्नै धारणा छन् । तपाईको पनि परिभाषा उत्कृष्ट नै छ सायद जिवनमा कसैको साथ बाट अलग भएर उसको मायालाई विर्सन नसकेर कति शब्दमा कति भावमा त कति मन मनै व्यक्त गरिरहेकै हुन्छन तर तपाईले शब्दमा व्यक्त गर्ने प्रयास गर्नुभएजस्तो मलाई लाग्यो कहाँ सम्म सही हो त्यो तपाईलाई नै थाहा होला………………..
arvindra shaky | 20/09/2011 मा 2:37 अपराह्न |
patra ta ramraii cha tara yasma aajai kieha kami kamjore haru dheraii nai chan ajaaii ramro garera lekhna saknu hunthyoo aaasaa garchu yo vanda pane ramro tapai ko parta hunecha dhanyabaad